Sida loo noqdo hogaamiye ku saabsan bogga raadinta badeecada Amazon?
Maalin kasta malaayiin ka mid ah macaamiishaada iman kara waxay sameeyaan baaritaanka alaabta ee Amazon. Su'aasha ayaa ah sida loo sameeyo alaabtaada oo la arki karo macaamiishaada la beegsaday waxayna ka dhigtaa inay doortaan soo jeedintaaga oo ka mid ah soo jeedinnooyin badan oo la mid ah kuwa ku tartamaya suuqa.
Amazon waa mashruuc aad u faa'iido leh oo loogu talagalay ganacsatada internetka halkaasoo qof walba uu kicin karo malaayiin doolar. Si kastaba ha ahaatee, halkan oo kale sida nolosha dhabta ah, si aad u noqotid mid ka mid ah iibiyeyaasha TOP, waxaad u baahan tahay inaad maalgaliso wakhti, dadaal, iyo lacag si aad u xoojisid jagooyinkaaga. Intaa waxaa dheer, waa inaad had iyo jeer ilaalisaa dhammaan Amazon algorithm isbedel iyo novelties.
In this article, waxaan ka wada hadli doonaa casriga cusub ee Amazon algorithm - vape store online us. Waxaa dhacay bishii Oktoobar 2016 oo loo yaqaanay maalintii markii Amazon ay badashay shuruudaha adeegga. Warbixintan waxay keentay in badan oo warar iyo doodo lala yeesho bulshada Amazon iibiya. Qaar ka mid ah ganacsatada internetka ayaa lumiyay jagooyinkooda iyo caanahooda Amazon SERP, halka kuwa kale ay heleen fursado dheeraad ah si kor loogu qaado iibkooda.
Sidaa daraadeed, aan marka hore ka doodno sida casriyeynta Amazon algorithm u bedeshay sharciyada ciyaarta Amazon iyo maxay tahay fursadaha laga faa'iidaysto? TOS
Isbeddelka raadinta alaabta Amazon ee ay keentay TOS
Iyadoo la tixgelinayo xogta la baaray ee ay bixisay Dib u eegista Kick, waxaan u falanqeyneynaa saameynta Shuruudaha Adeegga ee Amazon iibiyeyaasha . Cilmi-baaristaan ​​ayaa muujisay in 6,000 oo ka mid ah alaabooyinka, kaliya 25% dukaamada tafaariiqda ah ay lumiyeen dib-u-eegistooda Noocyada aadka u saameeyey TOS waxaa ka mid ah jikada iyo cuntada, qalabka elektarooniga, caafimaadka iyo shakhsiyeed, ilmaha, quruxda, iwm.
Taas macnaheedu waa in suuqyadu ay ku badan yihiin boqolkiiba sagaashan tartanka kuwa kale. Marka la eego xogta tirakoobka, alaabooyinka leh qiyaaso badan oo dib u eegis ah ka hor inta aan la beddelin TOS ayaa ku fashilantay in ay lumiso boqolkiiba waxoogaa ka sareeya dib u eegista. Waa in la ogaadaa in qaybo gaar ah loola beegsan yahay in laga saaro. Badeecooyinka lumay qaar ka mid ah alaabooyinka ayaa keenay hoos u dhac iyo hoos u dhigida xiddigaha..
Markii ay soo baxday, inta badan iibiyeyaasha Amazon ma saameyn. Kaliya kuwa soo saaray boqolaal kun oo dib u eegis ah oo ka mid ah alaabtoodu waxay saamaysay Amazon TOS. Waxaa loola jeedaa in Amazon ay bartilmaameedsadeen badeecooyin xoog leh oo ku saabsan dib u eegista alaabada. Recently, waxay ahayd sharci si loo abuuro tiro badan oo dib u eegis ku saabsan alaabta Amazon. Si kastaba ha noqotee, ma aha darajo shaqo oo kobciya istaraatiijiyada ka dib casriyeynta Amazon algorithm ee ugu dambeysay.
Si kastaba ha ahaatee, micnaheedu ma'aha inaan u baahneyn inaan ku ordo dallacsiinta ama ka shaqeynaya xawaaraha xayeysiinta iibka? Su'aalahani waxay u baahan yihiin jawaab degdeg ah maaddaama ay qaar ka mid ah ganacsatada internetka ka dhigaan kuwo si wax ku ool ah u xeeladeysan xeeladaha dhiirigelinta iyo xeeladaynta.
Iyada oo la eegayo iftiinka ugu dambeeya ee Amazon algorithm, xeeladaha soo-kabashada soo socda ayaa shaki gelin doona sumcaddaada iyo bogga darajada.
Maalmahan, ma dhiirigelin kartid macaamiishaada si ay u sameeyaan dib u eegis ku saabsan alaabtaada. Ma jirto siyaabo aad macaamiisha u waydiisato dib u eegis wanaagsan oo lagu beddelayo hadiyad ama sicir-dhimis. Wax kasta waa in loo sameeyaa si dabiici ah iyo mid jir ahaanba. Haddii kale, dib u eegistaada oo dhan waa la tirtiri doonaa kadibna dadaalkaaga oo dhan waa la burburin doonaa. Intaa waxaa dheer, iibiyeyaashu ma awoodaan inay kormeeraan macaamiisha kuwaas oo helaya lambarka santuuqa, si ay u hubiyaan inay ka tagayaan dib-u-eegid iyo haddii kale.
Dhamaan ficilladan mamnuucaya waxay u adeegsadaan xadeynta qadarka been-abuurka, lacag-bixinta, ama dib-u-eegis lagu dhiirigeliyo. Si kastaba ha ahaatee, wali waxaa loo ogol yahay in dadka ku dhiirri-galiya inay ka baxaan dib-u-eegista dabiiciga ah oo daacad ah oo ku saabsan khibradooda.